आइपिएलको बिजेताले पाउने रकम थाह पाउँदा दुनियाँ हैरान , कति पाउँछन् त ? हेर्नुस – Nepal Trending
आइपिएलको बिजेताले पाउने रकम थाह पाउँदा दुनियाँ हैरान , कति पाउँछन् त ? हेर्नुस
काठमाडौं : इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को बाह्रौं सिजनको फाइनल आइतबार राति हुँदैछ। हैदरावादको राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बेलुका पौने ८ बजे सुरू हुने खेलमा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किंग्स भिड्दैछन्। महेन्द्रसिंह धोनीले सम्हालेको चेन्नई र रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बईबीच आजको खेलमा एउटा साझा सपना हुनेछ, उपाधि जित्ने त्यो पनि चौथो पटक।
सन् २००८ मा सुरू भएको आइपिएलमा यी दुईमात्र यस्ता टोलीले हुन् जसले समान तीन/तीन पटक उपाधि उचालेका छन्। यो बीचमा धोनीको चेन्नई दुई वर्ष प्रतिबन्धमा पनि परेको थियो। चेन्नई आइपिएलको यस्तो टोली हो जो खेलेका १० सिजनमध्ये आठ पटक फाइनलमा र हरेक पटक नकआउट चरणमा पुगेको छ। तर चेन्नईले यसअघिका सातमध्ये ४ फाइनलमा हार ब्यहोरेको छ। त्योमध्ये दुई पटक मुम्बईसँग पराजित भएको छ। मुम्बई भने आफ्नो पहिलो फाइनल चेन्नईसँग हारेपछि कुनै पनि फाइनल हारेको छैन।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को बाह्रौं सिजनको फाइनल आइतबार राति हुँदैछ। हैदरावादको राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बेलुका पौने ८ बजे सुरू हुने खेलमा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किंग्स भिड्दैछन्। महेन्द्रसिंह धोनीले सम्हालेको चेन्नई र रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बईबीच आजको खेलमा एउटा साझा सपना हुनेछ, उपाधि जित्ने त्यो पनि चौथो पटक।
सन् २००८ मा सुरू भएको आइपिएलमा यी दुईमात्र यस्ता टोलीले हुन् जसले समान तीन/तीन पटक उपाधि उचालेका छन्। यो बीचमा धोनीको चेन्नई दुई वर्ष प्रतिबन्धमा पनि परेको थियो।
चेन्नई आइपिएलको यस्तो टोली हो जो खेलेका १० सिजनमध्ये आठ पटक फाइनलमा र हरेक पटक नकआउट चरणमा पुगेको छ। तर चेन्नईले यसअघिका सातमध्ये ४ फाइनलमा हार ब्यहोरेको छ। त्योमध्ये दुई पटक मुम्बईसँग पराजित भएको छ। मुम्बई भने आफ्नो पहिलो फाइनल चेन्नईसँग हारेपछि कुनै पनि फाइनल हारेको छैन।
आईपीएलको पहिलो सिजनका विजेतालाई ४.८ करोड रुपैयाँ दिइएको थियो। सन् २००८ मा आईपीएलको पहिलो सिजनको खेल भएको थियो। त्यो बेला विजेता टिमलाई ४.८ करोड नगद पुरस्कार दिइएको थियो। सन् २०१५ मा विजेता टोलीलाई १५ करोड भारु दिइएको थियो। गत साल च्याम्पियन बनेको टिमले २० करोड रुपैयाँ पाएको थियो । चेन्‍नई र मुम्बईको टिमले तीन-तीन पटक उपाधि जितिसकेका छन्।
सबैभन्दा धेरै पुरस्कार च्याम्पियन्स लिगमा च्याम्पियन्स लिग फुटबलको तुलनामा आईपीएल विजेतालाई १२० करोड रुपैयाँ कम नगद मिल्नेछ। च्याम्पियन्स लिग विश्वकै लोकप्रिय र ठुलो फुटबल लिग हो। यसको विजेताले १५ करोड रुपैयाँ नगद पाउँछ। अमेरिकामा हुने बास्केटबल प्रतियोगिता एनबीएका विजेतलाई १३९ करोड रुपैयाँ दिइन्छ। यी दुवैको तुलनामा आईपीएल विजेतलाई धेरै कम रकम मिल्छ।